Charchit Online Khabar » कति बेला नुहाउँदा राम्रो हुन्छ ? जानी राखौ
कति बेला नुहाउँदा राम्रो हुन्छ ? जानी राखौ
प्रकाशित मिति : २४ पुष २०७७, शुक्रबार १०:३३
काठमाडौं ।कति बेला नुहाउँदा राम्रो होला, बिहान वा बेलुका रु पहिलो पटक सुन्दा यो निकै साधारण प्रश्न लाग्ला । तर जब तपाईं यो प्रश्न आफ्ना परिचितलाई सोध्नुहुन्छ, यसको भिन्न उत्तर पाउनुहोला । कतिले राती नुहाउनु राम्रो भन्लान् कतिले भने बिहान । नुहाउने समय स्थितिमा निर्भर हुन्छ । जस्तै तपाईंको छालाको प्रकार, तपाईंको कामको प्रकार र तपाईं कति प्रदुषण वा धुलोसँगको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ । तपाईंले नुहाउने सही तरिकालाई यसरी छान्नुहोस् ।
यदि अस्पताल वा भवन निर्माण साइट आदिमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईं लगातार धुलो, प्रदुषण वा किटाणु आदिको सम्पर्कमा रहनुहुन्छ त्यसकारण सुत्नुअघि नुहाउनुपर्छ ।source – news of nepal